भाइरल गायिका रानुको जीवनमा फेरी अध्यारो, फर्किइन पुरानो घरमा! – Dainiksamchar
HomeInternationalभाइरल गायिका रानुको जीवनमा फेरी अध्यारो, फर्किइन पुरानो घरमा!
भाइरल गायिका रानुको जीवनमा फेरी अध्यारो, फर्किइन पुरानो घरमा!
October 13, 2020 admin International 3355
एजेन्सी, सन् २०१९ मा सामाजिक संजालमा भाइरल भएकी गायिका रानु मण्डलको जिन्दगीमा अध्यारो छाएको छ। रानु मण्डलले रेल्वे स्टेशनमा बसेर चर्चित गायिका लता मंगेश्वकरको गीत गाएर रातारात भाइरल भएकी थिइन्।
सामाजिक संजालमा पनि उनको गाएको गित भाइरल भएको थियो। त्यसपछि उनको भाग्य नै चम्किएको थियो । तर संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण उनको जीवन पुन: पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ।
कोरोना भाइरसको कारण अहिले बलिउडमा कुनै काम भएको छैन। त्यसैले रानुको आर्थिक स्थिति खराब हुदै गएको छ। भारतीय समाचार माध्यमको अनुसार रातारात भाइरल भएपछि रानु नया घरमा बस्थिन तर अहिले उनि आफ्नो पुरानै घरमा फर्किएकी छिन्। रानु मण्डललाई गित गाउँको लागि हिमेश रेशमियाले मौका दिएका थिए। त्यसपछि अझ बढी उनको चर्चा हुन थालेको थियो। एकपटक उनि धेरै मेकअप गरेको कारण ट्रोल समेत बनेकी थिइन्।
September 30, 2020 admin International 862
एजेन्सी । अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधनको विषयले अहिले नयाँ मोड लिएको छ । सुशान्तकै परिवार पनि शंकाको घेरामा परेका छन् । सुशान्तका वुवा के के सिंहले दिएको उजुरीका आधारमा सुशान्तको प्रेमिका भनिएकी रिया चक्रवर्तीलाई
कस्तो अचम्म ! बाख्राले जन्मायो मान्छे जस्तो बच्चा, हेर्नेको घुँईचो
October 6, 2020 admin International 945
एजेन्सी । के बाख्राले मानिसका जस्ता बच्चा जन्माएको कहिल्यै सुन्नुभएको छ रु सामाजिक संजालमा अहिले बाख्राले जन्माएको मान्छेको जस्तो बच्चाको तस्विरले हंगामा नै मच्चाएको छ । यो घटना फिलिपिन्समा घटेको हो । डेनिस कैरिएज नाम
October 4, 2020 admin International 523
यदि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेका विषयवस्तुहरूमा ध्यान दिनुहुन्छ भने टिभी सिरियल इश्कमें मरजावां २ को सुटकेस सिन जरुर देख्नुभएको होला।यो सिन भाइरल भएपछि यसले धेरै चर्चा पायो। सामाजिक सञ्जालमा यसको मजाक पनि बन्यो। भिडियो
LEX 18 agenda conversation: Job club (121794)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113695)
Hello world! (113369)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112127)